राति निन्द्रा नलागे के गर्ने ? | Cute Adina
राति निन्द्रा लाग्दैन भने थाहा पाईराख्नुस् यी कुरा ! उपयोगी जानकारी
निद्रा भनेको हाम्रो जीवनको आधारभुत आवश्यकता हो । आधारभुत आवश्यकतामा खाना, पानी, निद्रा, सेक्स आदि पर्छन् । २४ घण्टामा कमसेकम ७ देखि ९ घण्टासुत्न सक्यो भने शरीरलाई फाइदा हुन्छ । जसका कारण ब्रेनलगायत शरीरका महत्वपूर्ण अंगलाई आराम दिन्छ ।निद्रामा ९० मिनेटको साइकल हुन्छ । पहिलो २० मिनेटलाई सुरूवाती निद्रा भनिन्छ । जुन निद्रामा हामीहरु तुरुन्तै उठ्न सक्छौं । यसलाई ‘स्टेप स्लिप’ भनिन्छ ।
त्यसपछि करिव ५० मिनेट गहिरो निद्रा हुन्छ । गहिरो निद्रामा पुगेपछि मानिसलाई उठाउन गाह्रो हुन्छ र साइकलको अन्तिम १०–१५ मिनेटमा सपनाहरु आउने हुन्छ । यसरी ढेड घण्टाको एउटा साइकल हुन्छ । निद्रामा करीब ५–६ वटा साइकल पुरा गर्नुपर्छ ।यसरी निद्रा साइकल पुरा भयो भने हामी बिहान उठिसकेपछि फ्रेसको महसुस गर्दछौ । निद्रा नलाग्न कारणहरु के के हुन् ? निद्रा नलाग्ने कारणहरु धेरै छन् । शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आध्यात्मीक कारणले गर्दा मानिसमा निद्रा नलाग्ने हुन्छन् ।
शारीरिक कारणमा धेरै किसिमका शारीरिक रोग, टाउको दुख्ने, भोक नलाग्ने, बिभिन्न किसिमका शारीरिक पिडाहरु हुन्छन् । सामाजिक कारणमा तनावहरु जस्तै आर्थिक, पारिवारीक, व्यक्तिगत तनावले गर्दा पनि निद्रा लाग्दैन । त्यसैगरी आध्यात्मिक मानिसहरुमा योग, व्यायाम ग¥यो भने र इच्छा पूरा ग¥यो भने निद्रा लाग्ने हुन्छ । अर्को मनोवैज्ञानिक कारणहरुमा डिप्रेशन, एन्जाइटी लगाएतका रोगहरु पर्दछन् ।अर्को निद्रा आफैमा पनि एउटा रोग हुन्छ । जसलाई इन्सेम्निया भनिन्छ । निद्रा बढी लाग्ने पनि समस्या हो ? कोही कोही मानिसमा दिउँसै निद्रा लाग्ने रोग हुन्छ । यस्ता मानिसहरु महत्वपूर्ण कार्यक्रममा पनि निदाउछन् । त्यसैले चाहिने भन्दा धेरै निद्रा लाग्नुलाई नार्कोलेप्सी भनिन्छ ।
हामीहरु दैनिक ८–९ घण्टा सुत्ने गर्छौं तर नार्कोलेप्सी भएकाहरु त्यो भन्दा धेरै बढी सुत्ने हुन्छन् । साथै कोहीकोहीलाई दिउँसो निद्रालाग्ने भनेको धेरै खाना खाएपछि हो । यसमा मानिसलाई एक्कैछिन मात्र निद्रा लाग्छ र फ्रेस हुन्छ । दिउँसो निद्रा लागेर दैनिक कार्यमा धेरै असर ग¥यो भने केही औषधिहरु खानुपर्ने हुन्छ तर नेपालमा यो औषधि हालसम्म उपलब्ध छैन । यदि दिउँसो निद्रा लाग्छ भने सकमेसम्म ननिदाउनु नै उचित हुन्छ । निद्रासँग सम्बन्धित कस्ता समस्याहरू देखिन्छन् ? धेरै रोगहरु निद्रासँग सम्बन्धित हुन्छ । डिप्रेशन, एन्जाइटी जस्ता बिभिन्न रोगहरुमा निद्रा नै पहिलो समस्या हो ।डिप्रेशन, एन्जाइटी तथा अन्य मनोवैज्ञानिक रोगको पहिलो लक्षण नै निद्रा नलाग्नु हो । यसबाहेक रोगलाग्दा, चिन्ता, दुखाई, डर, मानसिक तनाव आदीका कारणले पनि निद्रा
नलाग्ने हुनसक्छ । कुनै रोग नलागि विभिन्न कारणले मानसिक तनाव हुने र त्यसले निद्रा नलाग्ने हुनसक्छ । निद्रा नलाग्ने समस्याहरु पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन् । कहिले काँही थकानले सुत्न लागेपछि १÷२ घण्टासम्म निद्रा नलाग्ने वा २ देखि ३ घण्टापछि निद्राखुल्ने र फेरी निद्रा नलाग्ने हुन्छ । राती निद्रा खुलेर पुनः सजिलै लाग्छ, भने यो रोग भने होइन । निद्रामा बरबराउने किन हुन्छ र बरबराउनु रोग हो ? निद्राको साइकल हुन्छ । त्यो साइकल पार गर्दै जाँदा सपनाहरु आउने हुन्छ ।
सबै मानिसलाई प्रत्येक दिन सपना आउँछ तर जसलाई निद्राको समस्या हुन्छ, त्यस्ता मानिसले धेरै सपना देख्ने हुन्छ । किन भने धेरै जसो सपनाहरु गहिरो निद्रामा देखिन्छ ।गहिरो निद्रामा आएको सपना सम्झिन सकिदैन । तर कम गहिरो निद्रामा आउने सपना मात्र सम्झने हुन्छ । त्यसैले कहिलेकाँही सपनामा आउने कुराहरु बरबराउने हुन्छ । निद्राको कारणले नै बरबराउने हुन्छ । यो रोग होइन, यस्तो समयमा मानिसलाई पनि थाहा हुदैन । यो सपनासँग आउने मात्र हो । निद्रामा दाह्रा किट्ने कस्तो समस्या हो ? यो पनि निद्रामै हुने भएको हुँदा मानिसलाई थाहा हुदैन । यो पनि रोग होइन ।यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुहुदैन । निद्राको समयमा ऐठन किन पर्छ ? सुतेको समयमा शरीरका अंगहरु चल्ने हुन्छ । तर कहिले काँही कुनै अंगमा प्रेसर प¥यो भने त्यस ठाँउमा राम्रोसँग रक्तसंचार हुन पाउदैन । त्यस समयमा श्वासप्रश्वास बन्द भएको जस्तो हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा चेतनमा भएपनि निद्रामा भएका कारण मानिस चल्न सक्दैन जसले ऐठन हुन्छ । अर्को कारण एउटै पोजीसनमा लामो समयसम्म सुतेमा पनि ऐठन हुने हुन्छ । मानिस चलेमा यो आफै ठिक भएर जान्छ । निद्रामा हिड्ने कस्तो समस्या हो ? यसलाई चिकित्सकीय भाषमा सोम्नबोजिम भनिन्छ । सोम्नबोजिम भनेको निद्रामा हिड्ने समस्या हो ।
व्यक्ति आफैलाई निद्रामा हिँडेको थाहा हुदैन । यो समस्या गहिरो निद्रामा नपुग्दै सपनाको कारणले हुन्छ । यस्तो समस्यामा व्यक्तिलाई गहिरो निद्राको लागि औषधि पनि दिन सकिन्छ । यस्तो समस्या भएकाहरुले झ्याल, ढोकाको चुक्कल राम्रोसँग लगाउने जस्ता सावधानी अपनाउनु पर्छ । यसले शारीरिक असर गदैन तर कहिले काँही दुर्घटना हुन जान्छ । निद्रा लगाउने उपाएहरु के के हुन् ? जसलाई राती निद्रा लाग्दैन त्यसले राती सुत्ने र बिहान उठ्ने समय एउटै बनाउनु पर्छ । राती निद्रा लागेन भनेर बिहान ९ बजेसम्म सुत्नु हुदैन । बिहान नियमित एउटै समयमा उठ्नु पर्छ । त्यसैगरी यस्ता समस्या भएकाले चिया, कफि, सुर्तिसेवन गर्नुहुदैन ।
निद्रा नलाग्ने समस्या भएकाले सुत्नुपूर्व हल्का व्यायाम गरी तातो पानीले नुहाउने गर्नुपर्छ । साथै सुत्ने कोठालाई अँध्यारो र शान्त राख्नुपर्छ । बेडमा गएर निद्रा नलागेमा पुस्तकहरु पढ्ने गर्नुपर्छ । राती सुत्दा हलुका खानाखाने गर्नुपर्छ । बुझ्नैपर्ने कुरा रक्सिले निद्रा लगाउँछ भन्ने भ्रममा पर्नु गलत हो । रक्सि सेवनले केही समय निद्रा लगाउने भएता पनि पछिगएर रक्सिले नै निद्रा नलाग्ने समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । निद्रा नलागेमा के गर्ने, के नगर्ने ?
# छिटो सुत्ने
# एउटै समयमा सुत्ने र उठ्ने
# निदाउनको लागि मदिरा नपिउने
# चुरोट÷सुर्ती सेवन नगर्ने
# भोकै नसुत्ने तर हल्का मात्रै खाने
# नियमित शारीरिक गर्ने
# सुल्नु भन्दा पहिले करिव आधा घण्टा आराम गर्ने
# निद्राको लागि औषधी प्रयोग नगर्ने
# सुत्नु भन्दा पहिले मनतातो दुध वा पानि पिउने
# सुत्नु भन्दा पहिले मन तातो पानीले नुहाउने
# तनाव घटाउने # रोगको कारणले हो भने उपचार साभार -डाक्टर सुबोध पोख्रेल
स्रोत - kantipurtvnepal